संवैधानिक परिषद बैठकः देउवा उपस्थित, सभामुख सापकोटा अनुपस्थित - Everest Dainik - News from Nepal
संवैधानिक परिषद बैठकः देउवा उपस्थित, सभामुख सापकोटा अनुपस्थित
काठमाडौंः संवैधानिक परिषदको बैठकमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएका छन् ।
त्यसबारे सापकोटाका प्रेसविज्ञ श्रीधर न्यौपानेले भने, ‘बैठकका लागि सरकारबाट समन्वय, पूर्व तयारी र गृहकार्य नभएकाले आजको बैठकमा सभामुख अनुपस्थित हुनुभएको हो ।’
यसअघि मंसिर २८ गते आइतबार पनि परिषद्को बैठक बोलाइएको थियो । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालगायतको उपस्थिति नभएपछि बैठक स्थगित भएको थियो ।
कैलालीको धनगढीमा मंगलबार बिहान आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले पार्टी सभापति देउवालाई संवैधानिक परिषदको बैठकमा नजान सुझाव दिएका छन् । यद्यपी, देउवा बैठकमा सहभागी भइसकेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस फुटको संघारमा नेकपा, समाधान के ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार बिहान बालुवाटारमा संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले संबैधानिक परिषदको बैठकमा विपक्षी दलका नेता देउवा उपस्थित भएको र सभामुख सापकोटा अनुपस्थित रहेको जानकारी दिएका छन् । बैठक औपचारिक रुपमा बस्छ बस्दैन केही खुलेको छैन ।
याे पनि पढ्नुस प्रधानमन्त्रीको अवस्था के छ ? अस्पतालले जारी गर्‍यो विज्ञप्ति
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाकाे विपक्षी दलका नेता तथा उपसभामुख रहने व्यवस्था छ ।परिषदको बैठकमा प्रमुख विपक्षी दलको नेता अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान छ । साथै बैठकले बैधता पाउनका लागि अध्यक्षबाहेक ४ जनाको उपस्थिति अनिवार्य मानिन्छ । परिषदमा एकजना सदस्य (उपसभामुख) पद रिक्त छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महिला आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा गरी ४० भन्दा बढी पद रिक्त छन् ।
याे पनि पढ्नुस ओली पक्षले बनाएको केन्द्रीय सदस्य पद अस्वीकार गर्ने बढ्दै, सांसददेखि मन्त्रीसम्म विरोधमा !
ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक बोलाएपछि नेकपा विवाद झन उत्कर्षमा पुगेको छ । संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्दा पार्टीको सहमति र सल्लाह गर्नुपर्ने भन्दै नेकपाको गद भदौ २६ को बैठकले निर्णय गरेको थियो । यसअघि नै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन तथा राजदूत नियुक्तिमा भदौ २६ को सहमति पालना नभएको आरोप कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड पक्षले लगाएपछि विवाद चुलिएको थियो ।
ट्याग्स: अग्निप्रसाद सापकोटा, केपी शर्मा ओली, संवैधानिक परिषद